La Raadinayo: Farsamo-yaqaan Extraordinaire | Martech Zone
Saaxiibkeyga wanaagsan iyo lataliyaha, Chris Baggott, wuxuu raadinayaa CTO shirkadiisa, Barnaamijka Compendium. Maaddaama ay tani tahay bilow, Chris wuxuu raadinayaa inuu soo ururiyo xirmo dagaal badan oo soo jiidan doona xiddiga uu u baahan yahay. Chris iyo Ali Sales waxay leeyihiin aragti fantastik ah oo ku saabsan Compendium, waxay leeyihiin maalgelin, haddana waxay rabaan inay hoos ugu dhacaan xirmooyinka naxaasta ah oo ay nidaamka u dhismaan.
Kama hadli karo wax badan oo ku saabsan waxa nidaamku sameyn doono, kaliya waa aragti kacaan ah oo ku saabsan baloog garaynta taasoo horseedi doonta natiijooyinka ganacsiga, gaar ahaan baloogyada shirkadaha. Chris wuxuu ubaahanyahay qof leh hibada farood si uu ugu hogaamiyo aragtidan xaqiiqda. Fikrad ahaan, shaqsigan waa inuu lahaadaa asalka bilowga, isku xirka bulshada, baloog garaynta, raadinta, iyo horumarka iyo qaab dhismeedka loo baahan yahay si loo dhiso dalab heer ganacsi ah. Dabcan, asalka cajiibka ah ee horumarka waa qasab in la haysto - iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada ugu fiican (doorashadaada).
Haddii aad karti leedahay, tani waxay noqon kartaa tigidhkaaga. Chris wuxuu gacan ka geeystay kobcinta ExactTarget to Inc 500 shirkadaha ugu koritaanka badan dalka. Isagu waa heshiiska dhabta ah. Wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad soo gudbiso resumeygaaga, kala xiriir Chris adoo adeegsanaya Websaydhka Compendium. Ma jiraan qandaraaslayaal doonaya - tani waa boos keliya, oo waqti buuxa ah.
Haye Doug. Tani waxay u egtahay mid xiiso leh oo dhab ahaantii toosan.
Waxaan la yaabanahay inaadan ka boodayn fursaddan mar haddii aad xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn iyo shaqsiyadeed aad la leedahay Chris.
Waxay umuuqataa bilihii lasoo dhaafay inay ahayd waqti aad ufiican bilowgyaashu inay kasbadaan, marka qofkasta oo leh xirfadaha waa inuu isla markiiba ku boodaa… yaa garanaya, Compendium wuxuu noqon karaa iibka xiga ee laacib weyn…
Kaliya ka fikir xulashooyinka saamiyada 🙂
Waa salaaman tahay Sean,
Chris waa nin istaag ah waligiisna halis uma galin doono inuu ka soo jiito hibo ExactTarget dadaalkiisa.
Sidoo kale, waxaan u maleynayaa inuu Chris dhab ahaantii u baahan yahay qof leh barnaamij asal xirfadeed xoog leh. In kasta oo aan si xirfad leh u horumaray, haddana waxaan aad uga badan ahay maamule wax soo saar, oo tilmaamaya istiraatiijiyado iyo baahiyaha macmiilka, ka dibna u beddelaya kuwa looga baahan yahay kooxaha horumarinta. Taasi waa niche.
Waxaan tan ku dhajinayaa barteyda, in kastoo, si shabakaddaydu u gaarto. Chris wuxuu ubaahanyahay sida ugufiican uguna fiican tan waxaanan doonayaa inaan sameeyo waxkasta oo aan kari karo si aan uga caawiyo guusha Compendium! U gudbi macluumaadkan haddii aad qof wax ka ogtahay.
Waad ku mahadsantahay qoraalka Doug. Nasiib darro, tartan la’aanteyda 'ExactTarget' ayaa Doug ka dhigeysa meel aan gaaro.
Qofka saxda ah ee tan wuxuu leeyahay hogaamin, aragti wuxuuna aad ugu dadaali doonaa inuu shirkadan guuleysto. Waan ognahay waxa aan dooneyno inuu softiweerku sameeyo… waxaan leenahay macaamiil safka… waxaan kaliya u baahanahay xubinta saxda ah ee kooxda inay la timaado oo ay hogaamiso dadaalkeena tikniyoolajiyadda.
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 9:37 AM
Haye halkaas Doug - Aniguba kalsooni buuxda ayaan ku qabaa in Chris iyo dadaalkiisa, oo ay weheliyaan dadka saxda ah, ay Compendium Software ka dhigi doonaan guul kale oo dhab ah oo Chris ah.
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 10:02 AM
Cajiib! Ganacsade kale oo tayo leh oo maxalli ah oo booqda degelkayga! Kuwiinna idinka mid ah ee aan arag ama maqal shimbiraha duurjoogta ah ee aan xadidneyn, hal ku dhigoodu waa "Isku soo dhoweynta dadka iyo dabeecadda ayaa ka dambeysa wax kasta oo aan sameyno." Iyagu waa shirkad aan caadi ahayn.
Waana suuqley aan caadi aheyn. Marar dhif ah ma arag shirkad shaqo weyn ka qabata la xiriirida macaamiishooda iyo ku xirnaanshaha iyaga. (Awoowgay waa macmiil lagu faano!)
Waad ku mahadsan tahay joojinta, Marty. Compendium waa isbeddelka ku dhaca baraha internet-ka! In kasta oo dadka kale ay dhisayaan aalado iyo fiilooyin, shirkadda Chris 'waxay dhiseysaa xalka keenaya raadinta iyo waxyaabaha ka kooban! Ma sugi karo inaan tijaabiyo kaxeeyo!